Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ndị nledo na Skype ozi na gị iche bụ ihe Android ma ọ bụ iPhone, mgbe ahụ a anya na ihe ị pụrụ ime na ExactSpy – Sochie Skype Ozi:
Ele Skype Chats tinyere ozi ugboro na AFỌ
Ele profaịlụ foto na aha onye ọ bụla Chats na ha
Lee foto, na obere vidiyo na-ege ntị ọdịyo ozi
Tịm fiọk: Ị chọrọ “Akpata” android cell ekwentị soro Skype ozi.
Gịnị mere na ị chọrọ ExactSpy – Sochie Skype Ozi.
Na-echegbu onwe anyị banyere nwa gị unsupervised mmadụ mgbasa ozi na-eme na-ezu gị ụra? Ị na-steaming ara gị ọrụ akparị ụka pụọ ​​na ụlọ ọrụ oge?
Iji ike emegbu mmadụ ma ọ bụ na nzuzo nkwukọrịta na ndị asọmpi nwere ike na-ewere ọnọdụ bụghị naanị site na ekwentị ma ọ bụ ozi ederede, kama site n'aka Skype nakwa. Ị mkpa ịdị maara nke ihe na-aga na gị underage ụmụ na ndị ọrụ na iji gbochie ihe ọ bụla na-enweghị isi nsogbu na-abịa ha ma ọ bụ ka azụmahịa gị. Nke ahụ bụ kpọmkwem ihe mere i kwesịrị itinye ego na ExactSpy na Monitors niile Skype mmekorita na a mobile ngwaọrụ.
Ị na-enyo onye gị na-eji Skype ka discretely ha ekwurịta okwu nzuzo n'anya? ExactSpy na-ahapụ gị iledo na ha Skype ozi na-ahụ aha na foto nke onye ọ bụla ha ikori na. Ị nwere ike ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi ịmata ọdịiche dị ọcha ozi site nwere egwu otú ị ga-abụ ndị ikpeazụ na-amaghị banyere ma ọ bụrụ na ị na-na-na-ụgha na-. N'adịghịkwa sọọ mpi na ngwaahịa, ExactSpy – Sochie Skype Ozi na-ahapụ gị ele akwụkwọ mmado na Emoticons, na alerts unu mgbe ọ bụla ha na-kọntaktị ma ọ bụ ọnọdụ data na onye ọzọ - nkọwa ndị na-ga-enyere gị na-azịza ị na-achọ.
Skype chat spy, Skype spy software, Skype spying software, Skype video spy, Spy skype conversations, Sochie Skype Ozi
← ExactSpy – Cell ekwentị GPS Tracker Free